Sw Anand Arun Interview by Nagarik News डिस्टर्ब्ड मनले परिवर्तन खोज्छ : स्वामी आनन्द अरुण : Osho Tapoban
Sw Anand Arun Interview by Nagarik News डिस्टर्ब्ड मनले परिवर्तन खोज्छ : स्वामी आनन्द अरुण
काठमाडौँको नागार्जुन डाँडामा अवस्थित ओशो तपोवन इन्टरनेसनल कम्युनका संस्थापक हुन्, स्वामी आनन्द अरुण। विदेशमा मात्रै उनका हालसम्म ७५ वटा मेडिटेसन सेन्टर सञ्चालित छन्। ओशोका अनुयायी स्वामी अरुण आफूले लाखौँ व्यक्तिलाई दीक्षा दिइसकेको बताउँछन्। ‘अन्तर्यात्रा’, ‘सन्त दर्शन’, ‘सन्त गाथा’ जस्ता किताब पनि लेखेका छन् उनले। उनीसँग सजना बरालको संवादः
तपाईंलाई ‘आध्यात्मिक सेलिब्रिटी’ भनियो भने…
अध्यात्ममा यस्तो अभिरुचि भएको मान्छे ! के सोचेर इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको थियो ?
हाम्रो पालामा इन्जिनियरिङ भनेको टन्न पैसा कमाउन सकिने, पक्की घर बनाउन सकिने, आकर्षक विषय/पेशा थियो। मेरा अभिभावकले पनि त्यही देखेर मलाई पटना युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठाउनुभयो। तर, मलाई यो विषयमा कुनै रुचि थिएन। दर्शन वा मनोविज्ञान पढ्ने रहर थियो। करकापमा इन्जिनियरिङ पढेँ। कोर्सबुकभन्दा धेरै धर्म र दर्शनका किताब पढ्थेँ। किताब त मैले कति पढेँ कति ! अहिलेसम्म ५० हजारजति किताब पढिसकेँ होला। गुरुहरू खोज्दै आश्रम, आश्रम चहार्थें त्यो बेला। ‘यो जोगी हुने भयो’ भनेर आफन्तहरू निकै डराउँथे।
ओशोका विचारहरू प्रचार गर्न विदेश जान्छु। विभिन्न २० वटा देशमा हाम्रा आश्रम खुलेका छन्। तिनलाई हेर्न र त्यहाँका मान्छेलाई उत्साहित गर्न विदेश जानैपर्छ। तर, त्यहाँ पनि मलाई बेचैनी हुन्छ। जतिसुकै सुविधासम्पन्न होटलमा बसे पनि मन आनन्दित हुँदैन। आश्रममा पुगेपछि चाहिँ ढुक्क भइहाल्छु। बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथको छेउछाउ पुग्दा पनि मेरो बेचैनी हराउँछ। अंग्रेजीमा ‘बुद्धफिल्ड’ भन्छन् नि– हाम्रा लागि आश्रम र धार्मिक स्थलहरू बुद्धफिल्ड (ऊर्जाक्षेत्र) हुन्।
फेसबुक धेरै चलाउनुहुन्छ क्यारे। अपडेट गरिरहनुहुन्छ।
अनुशासन नभएर। उनीहरूको आफ्नै जिन्दगी अनुशासित हुँदैन। हठयोग ठीक कुरा होइन। मान्छेका केही स्वाभाविक वृत्ति हुन्छन्। ती स्वाभाविक वृत्तिलाई अस्वाभाविक बनाउन खोज्यो भने दुर्घटना हुन्छ। कामवृत्तिलाई बलजफती दबायो भने विष्फोट भइदिन्छ। अमेरिका जाने अधिकांश बाबाहरू सेक्स स्क्यान्डलमा फस्छन्। किन ? किनभने अमेरिकामा उनीहरू स्वतन्त्र महसुस गर्छन्। ‘यहाँ देख्नेवाला कोही छैन, जे गरे पनि कसैले माइन्ड गर्दैन’ भन्ठान्छन्। तर, होइन। अमेरिकनहरू त झन् धेरै चासो दिने खालका हुन्छन्। सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रवत्तिका हुन्छन्। त्यसकारण योगीहरू त्यहाँ रंगेहात समातिन्छन्। अप्राकृतिक यौन जीवन बाँच्न खोज्दाका परिणाम हुन् यस्ता घटना।
अरूलाई भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो ! म पनि सबै कुरा शतप्रतिशत लागू गर्न सक्दिनँ। ९० देखि ९५ प्रतिशत चाहिँ लागू गर्छु। पाँच प्रतिशत गर्न सकिरहेको छैन। तर, प्रयास गरिरहेको छु। साधना भनेको एक दिनमै गरिसक्ने कुरा होइन। समय लाग्छ। तर, बारम्बार प्रयास गरिरहनुपर्छ। सिकाएका कुराहरू जोगीहरू आफैँ गर्दैनन्। त्यसैले त समस्या हुन्छ।
जंगलभित्र बसेर ध्यान गर्नुहुन्छ। नाच्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ। कतिले त मूर्ख ठान्दा हुन् तपाईंहरूलाई।